Goltile Kusvira maid 08.09.2021 08.09.2021 Comments
Zi News 24 — Kusvira Maid wemazigaro Mukadzi aenda kuChurch
Comments Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa! Ma brakes ekuzvibata sababa vemba akaruza. Ende zvekuti self control zviya unenge wakaguta beche Usiku uhwu ndange ndiri super charged zvekuti dei pressue yemuma chende angu yai mhezhwa yaiwanikwa iri muma thousand Kpa kudarika pressure yematyre e gonyeti 30 ton truck.
Ndanga ndakatakura abnormal load yekuda beche. Ndakazongo pembenuka Maid avamumaoko mangu.. Ndakatanga kuyamwa mazi mukaka ake zvandisina kumboita chero zamu ra amai vangu nyakubereka. Iye wakangoti ziblambi rangu mbaaa kunge munhu akabata musoro wenyoka. Ndakayamwa kunge kacheche kapedza 3 days nenzara. Ndakazofambisa ruoko kuisa pakati pemakumbo ake wanikei yangova Kariba dam zvayo.
Mwana anga atota zvake iyeye. Ndakanzwa oti.. Ndakaiti pfeee zvinyoro nyoro kusvira maid.. Izvo kwete kunakirwa nemboro chete. Apa mazizamo aichukuchika kunge aiswa mu shake shake kuri kusvira maid wangu. Mwana akatunda kekutanga akago zhamba zvekuti ndakada kumubata muromo. Aka tunda kechipiri pasinanguva, Ndakabva nda mu turna. Ndokumu rarisa ne dumbu. Ndoku vhura makumbo ake, iye akabva anyatso simudza chiuno chikamira kunge manhenga e peacock.
Achingo simukira ndoku nyatso gwadama nemabvi nemagokora. Beche rose rakauya kumashure. Ndakaona infrastructure anatomy yebeche rake rose. Apa garo nema hips zvaive round kunge zvaka dhirowewa ne compass. Mboro yangu yakashatirwa ikavhura ziso rayo rimwe chete iroro. Ini ndakango bata matako ake , ndokubva mboro yango nanga yega mubeche , kwakutanga kusvira maid.
Apa ndipo pandakapa kutenda. Beche rake rakaita kunge mune ruoko mukati rwaibatamboro yangu rwuchiregedza zvinyoronyoro. Ndakamboramba ndakai nyudza chete ndisinga koiri ndichinyatso terera kutswinya kwebeche rake.
Ndakazotaga kuchimu kwiza iye achito nyanya kukotama futi. Zveshuwa akandikwira, ini rumwe ruoko ruchitekenya mazizamu rumwe kumagaro iye achiita kunge ari pa bhiza akagarira mboro yangu. Ndakazonzwa kanguva oita noise yake ndikaziva kuti wotunda. Ipapo machende angu aka regedzera ndikanzwa iye awedzera kuchema ndikaziva kuti atsva ne mhodzi dzaputisirwa mberimberi kwebeche rake. Akangoti zete ari pamusoro pangu. Takambundirana kwekanguva. Hope dzangu dzakauya chopaz.
Ndakazo pembenuka ndichitorota ndinamai mufana my wife. Kunoti bamhamha wanei ….. Ndakamuka ndichi nyarakunge mukuwasha aona bhurugwe raambuya. Ndakazopa maid mari yekutenga morning after kuvhara ma one e pregaz.. Ndakabva ndachinja mubhedha musi iwoyo.
Ndakazoenda out nebasa ndikadzoka 3 weeks later ndikawana maid adzingwa na mai mufana vachiti vakamubata aine hanzvadzi yavomubedroom make akavhura makumbo degrees achibowa nekunakirwa. Kana nekwaari mwana iyeye, murume achamuroora achatapirirwa chaizvo. Kusvira Maid kupotsa KumuMitisa appeared first on Vanodazvinhu.
Comments Kusvira Maid while madam was sleeping, Muzukuru akatarisa! Pamba pangu tinogara namaid anotirerera mwana. Madam vangu vanoshanda, iniwo ndinoshanda. Maid wedu musikana akanaka akabatana, ini nemadzimai tinomufarira stereki nekuti anotibatira mwana zvakanaka plus anoshanda mumba achifara nguva dzose.
Akangoitawo munyama wekushairwa mari yekuenda kuA level, nenjere dzainadzo aidai ari nurse kana teacher. Tinogarazve nemuzukuru wangu, nekuoma kwezvinhu mazuva ano basa riri kunetsa plus anekahunyope I think. But ndinofarira muzukuru wangu uyu nekuti anotibatsirawo mugarden uyezve kudoba-doba swimming pool. Nyaya yakatangira pandaitaura nemuzukuru wangu madzimai vangu vasipo tichinyeya maid.
Mumwe akati maybe anonaka zvisingaiti. Takenderera mberi tichingofantasaiza, muzukuru wangu akati paachamukwira achanakirwa zvekuoma gotsi chaizvo. Ini kwaakuti ndikamuwanikidza ndinomufendesa nayo nyoro. Taitaura kudai tiri panze kuseri kwegaraji but hatina kuziva kuti maid anga abudawo panze achinzwa tichumunyeya kudaro.
Akazokosora hake tikabva tacheuka tikaona achinyemwerera nyemwerera semisi yose isu tika recover very fast tikangoseka-seka zvedu. Akabva ati breakfast rave ready huyai mudye. Varume vakuru mukwane nhaika. BabaT kuzoti vari kuda kundiisa nyoro kani…he he he zvino havambondigoni. Saka paaibika mukitchen manheru acho madam vasati vadzoka kubasa hameno kuti chii chakatanga between maid nemuzukuru wangu. Vane havo system yekungonenedzerana kuita sevarumudzani saka handina kubatikana nezvaitaurwa.
But then muzukuru wangu akabva ati ukadaro ndooudza sekuru zvawaswera uchitaura masikati vasipo, achisekerera senge benzi ranhonga bond coin mubhini. Maid akaseka obva ati vaudze, kuti kunyeba here, achinyaririra senge muroora awanikidzwa achiita weti natezvara. Ini ndakazobvunza kuti yaimbova nyaya yei ndipo pakanzi nemuzuruku wangu again nditaure here, maid akati taura havambondigoni.
Ndopakatsemurirwa nyaya yose. Ndichinzwa izvi ndakabva ndanzwa kuda kusvira maid wedu ipapo ipapo but obviously zvange zvisingaiti. Ndakasimuka ndonanga kukitchen kuye ndikamupuruzira magaro akatanga kufemera pamusoro. Nekazeveze ndakati zvino wadenha mago iye akati uum tototenda yanyora annoited pen yapastor achinditswinya neziso achinyemwerera. Mukadzi wangu akabva asvika, ini ndikadzoka zvangu musitting room ndichihwandisa mboro yange yaita senge ndadya mazondo anevhuka vhuka neKUMIRA.
Vhiki rose rakatevera racho handina kuwana mukana wekusvira maid, zvainetsa kuorganizer nenyaya yedeadline kugraft ndaishanda late. Anyways zvakazoti rimwe zuva ndakanonoka kupedza kugraft ndakazosvika kumba madzimai varara. Muzukuru wangu namaid vaiona tv musitting room. Kubva zviya nanhasi hapana zvavati vaita. Ndakaziva kuti naiye aida mboro coz akaita yekudenha chaiko! Ndakabva ndasimuka ndakananga kukitchen kwaange ari.
Handina kutaura kana chinhu, ndakangosvika ndichitanga kumukisa ndichipuruzira magaro ake. Iye she kissed me back, mwana ane masoft lips haikona kutaura mhani. Apa ini mboro yangu yainge yaita sebvumbi ravhundutswa nebhinya. Akaswedera pandiri akagunzwa zimboro riye akavhunduka ndikanzwa oti maiwee! Takaramba tichikisana kudaro kwekanguva ndikatanga kubata bata mazamu ake, apa nguva yose muzukuru akatarisa Kusvira Maid while madam was sleeping Ainge asina kupfeka braa and ane size yemazamu yandinofarira, size C and akanyatsomira kuti twii.
Ndaibaiwa baiwa nawo pachipfuva zvichinyatsondipa dzungu nekutapirirwa. Akazoti muzukuru buda muno, muzukuru akati kwete, regai ndigare ndizonzwa mbuya kana mwana akamuka.
It made sense, saka takasiya muzukuru achizoona show. Aive akagara musitting room maziso akati dhee senge bveni radya dafi. Ndakabva ndabata beche ramaid nepaside pekaG-string wanikwei ratota zvisingaiti apa matinji kununira maihwe zvangu handichataura. Ndakambopuruzira beche, ndombotambisa tambisa matinji zvishoma zvishoma. Haana hake mazitinji mahombe hombe, saka zvakandifadza. Matinji mahombe anobhowa nekupedza energy mhani.
Ndakaisa rumwe ruoko mublauzi ndokutambisa manipplez. Mwana akayuwirira uku achindikisa chete. Kiss dzake dzainge dzemufirimu, akanyatsovharira tumaziso kani, i think kuswera achioona masoap opera paTV kwaanoita or zvima Korean films zviya. Pakange pasina time yekunotsvaga kondomu, ndakamuti akwidze gumbo one pamusoro pekitchen counter, ndikamufongoresa ndikabva ndapinza zimboro rangu zvine simba nehasha nepaside pekapanty kake ikako, ndobva ndaita zvekuisa chaiko about 5 or 5 times.
Mwana akahwihwidza zvepasi pasi uku achiedza kutambisa machende angu. Pasina chinguvana gumbo rake rakatanga kubvunda bvunda achitunda ini ndichingokoira chete ndakabata magaro. Akaedza kuda kutambisa magaro back but akabva ashaya simba.
Masasi unongonzwa iwe, Mboro yange yakazadza beche rese apa riri tight. Ndainyatsoona beche rese rakamedza mboro rakazara.
Ini ndaiti ndikati yese bvoo, ndokoira koira ndomboburitsa ndodaro futi. Ndakazonzwa mwana zii ini ndichitambisa zvangu tumanipplies itwotwo nekupuruzira magaro uku mboro yakangonyura chete. Ndakachinja ndikazobata magaro nemaoko ose kwakutanga kuchikoira ndichirova macorners ese ebeche iya inonzi Heavy Attack yenyini. Mwana aive nemagaro ainyevenutsa moyo.
Mboro yaibuda yakanyatsonunira nemajuices ebeche iye achingofemereka femereka semunhu arikubatwa ne Asthma Attack. Beche rainaka iroro apa rakati mbambamba kubatirira pamboro. Ndakabva ndazonzwa kuti ndakuda kutunda ndikangoramba ndichikoira senge ndabatwa nemadhimoni seven eSVIRO iye achindikuzirira nepasi pasi. Ndazoona zvangu zvauya ndiye tsa tsa! Maid akaramba achindipuruzira zvinyoro nyoro akazotendeuka ndokutangazve kundikisa zvine moto mukati.
Muzukuru wangu ndiye akazotivhundutsa oti imi chipedzai mhani munozowanikidzwa, plus maakundibhowa. Maid akazomhanyira kutoilet nekuti masperms ange akudzika negumbo…kkkk takamuseka. Akadzoka pave paya achiti i think stress yenyu babaT yambodzikira manje. Nanhasi ndikarangarira musi uyu mboro yangu inongoera yamira at attention semusoja akagadha president kucongress.
Muzuru hameno kuti akazopihwawo here beche asi ini i know kuti once ndasvira ka1 its non stop unenge watotenga chikwambo chete… Hokoyo Maid ndosvira futi….
Ndakaona infrastructure anatomy yebeche rake rose. Apa garo nema hips zvaive round kunge zvaka dhirowewa ne compass.
Mboro yangu yakashatirwa ikavhura ziso rayo rimwe chete iroro. Ini ndakango bata matako akendokubva mboro yango nanga yega mubechekwakutanga kusvira maid. Apa ndipo pandakapa kutenda.
Beche rake rakaita kunge mune ruoko mukati rwaibatamboro yangu rwuchiregedza zvinyoronyoro. Ndakamboramba ndakai nyudza chete ndisinga koiri ndichinyatso terera kutswinya kwebeche rake. Ndakazotaga kuchimu kwiza iye achito nyanya kukotama futi. Zveshuwa akandikwira, ini rumwe ruoko ruchitekenya mazizamu rumwe kumagaro iye achiita kunge ari pa bhiza akagarira mboro yangu. Ndakazonzwa kanguva oita noise yake ndikaziva kuti wotunda. Ipapo machende angu aka regedzera ndikanzwa iye awedzera kuchema ndikaziva kuti atsva ne mhodzi dzaputisirwa mberimberi kwebeche rake.
Akangoti zete ari pamusoro pangu. Takambundirana kwekanguva.
Hope dzangu dzakauya chopaz. He agreed zvikanzi enda hako since iye ainge aenda out nebasa. Anyway, ndakasvika kuparty ndokutanga hedu vanhu kufara, painge pakasangana mashamwari atete vavanoseenza navo kubasa kwavo, vakadzi nevarume, ha party yacho yainakidza zvekuti pfee. Ndaingotamba nekfarawo zvangu nevamwe vakadzi ipapo uye natete, tichifara kudaro ndakabva ndanzi natete nhasi sununguka hako mai Noku uri pamba patete baba Noku hapo kana uchida kungonwawo tu reds utu kuti uwane kunatsofara zvakana unongotorawo hazvina kushata.
Doro ranga ratopinda kudhara mumiri munongoziyawo kana usina kujairira, ndakatanga kunzwa nyere yekuda kusvirwa ndikashaya kuti ko zvabva nekupi futi, ndichipishingana nepfungwa kudaro pakabva padarika murume achitonwa zvake hwahwa achitaura pa fone, hameno chakaita kuti ndirambe ndakamutarisa, haa painge pane zverume ipapo, kuti ndiziye kuti pfungwa yakabvepi handiziye asi ndakatotanga kuita kamoyo keruchiva kaye, apa ne spray yainge akapfeka, haa kutaura chokwadzi ndakanzwa matinji angu achibhedhenuka mukati me pant.
Haana hake mazitinji mahombe hombe, saka zvakandifadza. Matinji mahombe anobhowa nekupedza energy mhani. Ndakaisa rumwe ruoko mublauzi ndokutambisa manipplez.
Mwana akayuwirira uku achindikisa chete. Kiss dzake dzainge dzemufirimu, akanyatsovharira tumaziso kani, i think kuswera achioona masoap opera paTV kwaanoita or zvima Korean films zviya. Pakange pasina time yekunotsvaga kondomu, ndakamuti akwidze gumbo one pamusoro pekitchen counter, ndikamufongoresa ndikabva ndapinza zimboro rangu zvine simba nehasha nepaside pekapanty kake ikako, ndobva ndaita zvekuisa chaiko about 5 or 5 times.
Mwana akahwihwidza zvepasi pasi uku achiedza kutambisa machende angu. Pasina chinguvana gumbo rake rakatanga kubvunda bvunda achitunda ini ndichingokoira chete ndakabata magaro. Akaedza kuda kutambisa magaro back but akabva ashaya simba. Masasi unongonzwa iwe, Mboro yange yakazadza beche rese apa riri tight. Ndainyatsoona beche rese rakamedza mboro rakazara. Ini ndaiti ndikati yese bvoo, ndokoira koira ndomboburitsa ndodaro futi. Ndakazonzwa mwana zii ini ndichitambisa zvangu tumanipplies itwotwo nekupuruzira magaro uku mboro yakangonyura chete.
Ndakachinja ndikazobata magaro nemaoko ose kwakutanga kuchikoira ndichirova macorners ese ebeche iya inonzi Heavy Attack yenyini. Mwana aive nemagaro ainyevenutsa moyo. Mboro yaibuda yakanyatsonunira nemajuices ebeche iye achingofemereka femereka semunhu arikubatwa ne Asthma Attack. Beche rainaka iroro apa rakati mbambamba kubatirira pamboro. Ndakabva ndazonzwa kuti ndakuda kutunda ndikangoramba ndichikoira senge ndabatwa nemadhimoni seven eSVIRO iye achindikuzirira nepasi pasi.
Ndazoona zvangu zvauya ndiye tsa tsa! Maid akaramba achindipuruzira zvinyoro nyoro akazotendeuka ndokutangazve kundikisa zvine moto mukati. Muzukuru wangu ndiye akazotivhundutsa oti imi chipedzai mhani munozowanikidzwa, plus maakundibhowa. Maid akazomhanyira kutoilet nekuti masperms ange akudzika negumbo…kkkk takamuseka. Akadzoka pave paya achiti i think stress yenyu babaT yambodzikira manje.
thoughts on “Kusvira maid”
Zoloshura on Kusvira maid
Copyright © 2021 Kusvira maid. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.